Kooxo hubeysan oo Xildhibaan ku dishay magaalada Gaalkacyo. | XAL DOON
Home NEWS Kooxo hubeysan oo Xildhibaan ku dishay magaalada Gaalkacyo.
Kooxo hubeysan oo Xildhibaan ku dishay magaalada Gaalkacyo.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa dil xalay magaalada Gaalkacyo loogu geystay Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka.
Xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Axmed Cumar (Tinle), ayaa laba nin oo bastoolado ku hubaysan waxay ku toogteen Bartamaha Magaalada Gaalkacyo, waxaana dhaawaciisa loola cararay isbitaalka, halkaas oo uu markii dambe ku geeriyooday, sida uu sheegay Gudoomiyaha Gobolka Mudug, Axmed Muuse Nuur.
Warar ay heshay Warbaahinta Xaldoon.Net ayaa sheegaya in labada dhalinyarada ah ee toogatay Xildhibaanka oo baxsad ahaa ay wadada isaga hor-yimaadeen askari,iyagoo dhaawac daran u geystay kadib markii ay rasaas ku fureen.
“Haa, waa isa soo kor taageen isagoo meherad ka soo horjeedda Somteel joogga, laba nin bay ahaayeen, bastoolad bay ku dhufteen, way carareen. Dariiqaa waxay soo mareen Saylaan, aaggaas markay marayeen askari qori sitaa ka horyimid isagiina xabad bay ku dhufteen oo waa dhaawac.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Ciidamada amaanka maamulka Puntland ayaa saaka howlgalo balaaran ka wada xaafado kamid ah magaalada Gaalkacyo, iyagoo ku raad jooga soo qabashada gacan ku dhiiglayaasha.